XOG: LIX Arrimood Ee Manchester United Ku Kallifaya Inay Shaqada Ka Caydhiso Solskjaer & Sida Uu Pochettino U Xallin kara - Gool24.Net
XOG: LIX Arrimood Ee Manchester United Ku Kallifaya Inay Shaqada Ka Caydhiso Solskjaer & Sida Uu Pochettino U Xallin kara
Manchester United ayaa ka fiirsanaysa inay shaqada ka caydhiso tababaraheeda Ole Gunnar Solskjaer, kaddib guul-darradii weynayd ee ay Tottenham ugu xambaarisay garoonka Old Trafford.
United ayaa ku jirtay xaalado adag tan iyo markii uu shaqada ka fadhiistay Sir Alex Ferguson sannadkii 2013kii, laakiin xili ciyaareedkii tegay ayay ka muuqatay saansaan ay dib ugu soo noolaanayso, inkasta oo Semi-finalkii FA Cup iyo Europa Cup intaba lagu garaacay, laakiin dhamaadkii ayuu Solskkjaer xoogsaday booskiisa kaalinta saddexaad ee horyaalka Premier League, taas oo siisay fursad ay Champions League xili ciyaareedkan kaga qayb-galaan.
Red Devisl ayaa la sheegay in usbuucan sii dhamaanaya ay xidhiidh la samaysay tababarihii hore ee Tottenham ee Mauricio Pochettino si uu u beddelo Ole Gunnar Solskjaer oo guddoomiye ku-xigeenka kooxda ee Ed Woodward uu u sheegay maamulka sare ee kooxda inuu shaqada ka caydhinayo.
Manchester United oo maalintii ugu dambaysay suuqa lasoo saxeexatay Edinson Cavani, Elex Telles iyo Amad Diallo iyadoo uu uga sii horreeyey Donny van de Beek, ayaa waxa hadda la sheegayaa in shaqada Solskjaer ay qirinqiir ku jirto oo laga yaabo inuu calfan waayo hoggaaminta kooxdiisa isbeddelka lagu sameeyey ee ciyaartoyda cusub lagu soo xoojiyey.
Lix arrimood ayaa la sheegay inay keeneen go’aanka uu Ed Woodward ku doonayo inuu shaqada kaga caydhiyo Ole Gunnar Solskjaer, waxaanay intooda badan ku sallaysan yihiin qaladaad dhacay intii uu tababaraha reer Norway kooxda joogay.
1. Natiijooyinka xunxun ee sii socda: Louis van Gaal iyo Jose Mourinho waxa intaba sahayday natiijooyinkii aan loo bogin ee ay ka keenayeen horyaalka iyo tartanka Champions League, waxaana Solskjaer culayska ugu badan ku ah natiijooyinka xunxun ee uu ka keenayo garoomada oo ay kooxdu iskala han weyn tahay.
2. Kubad qurux badan oo ay kooxdu ciyaarto: Ed Woodward waxa uu rumaysan yahay in haddii Pochettino uu kooxda yimaaddo inuu keeni doono falsafad ciyaareed oo hal-abuur badan oo si fiican u shaqayn karta, marka loo eego sida hadda uu Ole Gunnar Solskjaer u ciyaaro.
3. Culays ay saaraan Koobab qaadista: Waxa xaqiiqo ah in Pochetino aanu wax koob ah ku guuleysanin, laakiin hannaanka tababarenimo ee uu muujiyey muddadii uu xirfaddan ku jiray, waxay United ku qanacsan tahay inuu uga dhow yahay Solskjaer inuu koobab u qaado kooxda.
4. Qaabka ciyaartoyda loosoo jiito: Pochettino waxa uu ku fiican yahay sida ciyaaryahannada loosoo iibsado, iyadoo aanay waliba lacag badan kaga bixin, laakiin Solskjaer ayaa dhamaantood ku fashilmay inuu qanciyo laacibiintii uu xagaagan la xidhiidhay.
5. Rikoodhka lixda kooxood ee waaweyn: Manchester United waxay taageereyaasheedu ka niyad jabsan yihiin natiijooyinka kulamada waaweyn. Solskjaer muu xumayn intii uu shaqada hayay waxaanu laba jeer ka adkaaday Manchester City, saddex jeer oo uu garaacay Chelsea iyo Liverpool oo uu dhibic ka qaatay.
Laakiin haddana in dhinaca guulaha ay gaadhayaan naadiyadani lagula tartamo ayaa wax weyn ah.
6. Walaaca mustaqbalka ciyaartoyda: Paul Pogba oo uu qandaraaskiisu galay sannadkii ugu dambeeyey ayay Manchester United u baahan tahay inay ku qanciso inuu sii joogo, waxaanay u adeegsan kartaa Pochettino inuu laacibka reer France ka dhaadhiciyo inuu heshiis cusub saxeexo.